I-China i-Embossed aluminium sheet ifektri kunye nabavelisi | Hanyu
Amashiti afakwe kwi-aluminium
I-embossed ye-aluminium iplate ye-substrate ekhethiweyo ye-1060, 1100, 3003 kunye namanye amabakala, kunye nomhlobiso olungileyo, ukuchasana kwe-corrosion, iimpawu ezilungileyo zokuqhuba ze-orange peel embossed ye-aluminium coil substrate ye-1060, 1100, 3003 kunye namanye amabakala, ngokuhonjiswa okuhle, ukuxhathisa ukuvela kwe-corrosion kunye nokuqhuba okunamandla okushisayo.
Njengohlobo olutsha lwephepha lezinto ezinamaphepha, i-aluminium eluhlaza eyamkelweyo yamkelwe ngokubanzi kwintengiso. Iipleyiti ze-aluminium ezigugiweyo azinamsebenzi emininzi kuphela kwifektri kunye nakwindawo yokugcina izinto, kodwa zikwathandiswa ngabantu abaninzi ekuhonjisweni kwekhaya. Umbala wepleyiti yealuminium etyhidiweyo uyakhazimla, ulwakhiwo lukhanya, kwaye umphezulu uqaqambile,. Ke yintoni esifanele siyijonge xa ​​sinyamekela ipleyiti ye-aluminium efakwe ekhaya? Ngoku, masithethe ngayo.
I-1, kwinkqubo yombala ecocekileyo ye-aluminium ecocekileyo, kufuneka siyicoca ukusuka phezulu ukuya ezantsi, ukusuka ngaphandle ukuya ngaphakathi kwipleyiti yealuminium emboss. Uku-odolwa kufuneka kuhambelane nokuhambelana nemiyalelo efanelekileyo yomyalelo, kungenjalo kunokubangela umonakalo othile kwi-aluminium plate.
1. Isifudumezi sefandesi.Ukuqhutywa kweshushu kweplastiki yealuminium yi-237W / mK, engcono kunaleyo yensimbi. Ngaphantsi kweemeko ezilinganayo, isantya sokupholisa sikhawulezile, okungcono isiphumo sokupholisa siya kuba.Iplates ye-aluminium embossed eyenziwe nge-5052 ipleyiti ye-aluminium inemisebenzi emihle yokulwa nerust kunye nokuchasana neradi, eyandisa inkonzo yobomi besiqandisi. Uninzi lweefriji eTshayina zisebenzisa i-aluminium yeplagi yealuminium.
I-2, Izinto zokuhombisa zokwakha ezifana ne-aluminium yedonga le-aluminium), iphepha le-aluminium elihonjisiweyo likhangeleka likwazi ukusebenza ngeentlobo zonke zeepateni, linokuqhuba u-oxication we-anodic kwimbonakalo yazo, njengokuqhubekeka nokwenza, ukuze kufumaneke ilungiselelo elihambelanayo. , umbala kunye nembonakalo yokuhombisa kwayo kufuneka kugxilwe ngalo mzuzu, ngokubanzi, izixhobo ezilungileyo zokumelana notywala, amandla okwenza izinto anomahluko, imisebenzi yokulungisa imbonakalo, imisebenzi yokudibanisa ibalaseleyo.
I-3, ukugcinwa kubanda, ikhompiyutha, ikhabhathi yevili ephantsi, idla ngokuba ne-0.61mm ezintlanu iirekhodi zemitya ye-aluminium, inomsebenzi olungileyo we-skid, ukuxhathisa ukuxubeka kakuhle kulendima ingentla, ipleyiti yethu yealuminium engasetyenziselwa oku kulandelayo izinto:
Uhlobo lwe-alloy: 8011 ii-aluminium sheet
Ubushushu: H18, H26, H16, H24, H14, H22, H12, O
Ukuqina (mm): 0-9-0.8
Ubude (mm) :: 350-1500
Izicelo: I-coil ye-aluminium eguquliweyo isetyenziselwa kakhulu ukufudumeza umgangatho, umhlobiso, ibhodi yangaphakathi yefriji kunye nezinye iimveliso.
Kwangoko kwizixhobo ezikwistokhwe, iintsuku ezingama-20 ukuya kwezi-30 zokuThanjiswa kweMigidi
Akukho mabala e-oyile / amanqaku e-roll / umhlwa omhlophe / umda womda / i-dents / imingxunya / isikhafu kunye nezinye iziphene
Iipallet zeenkuni okanye iiPallets ezenziwe ngokwezifiso
Edlulileyo: I-1100 ye-aluminium strip
Okulandelayo: I-foil ye-aluminium ye-evaporator egqityiweyo
Abaxhasi bamashiti be-aluminium baxhonywa